အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 02/01/2022 23:34 | အဆင့်မြှင့်တင် 02/01/2022 23:37 | အထွေထွေစီးပွားရေး
ဘောဂဗေဒ၏ အခြေခံသဘောတရားများထဲမှ တစ်ခုမှာ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု၏ အကျိုးဆက်များ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို အကဲဖြတ်ရန် လူများနှင့် ကုမ္ပဏီများကို ကူညီပေးသည့် မက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေးအရသာမက ငွေကြေးအရသာမက မက်ခရိုစီးပွားရေးတွင်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါပေမယ့် အခွင့်အလမ်းစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ် Function တွေရှိလဲ။ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိလား? အားလုံးကိုသိချင်ရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်မှာပါ။
1 အခွင့်အလမ်းစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။
2.1 အခွင့်အလမ်းစရိတ်များ တိုးလာသည်။
3 အခွင့်အလမ်းစရိတ်က ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။
4 ငွေရေးကြေးရေးမှာ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်က ဘာလဲ။
အခွင့်အလမ်း ကုန်ကျစရိတ်လည်း များသည်။ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်ဟု ခေါ်သည်။ ပိုအရေးတကြီး သို့မဟုတ် ဦးစားပေးသော အခြားအရာတစ်ခုခုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်အလို့ငှာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်စေ စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်စေ ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးရီးတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေပါသည်။ အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ထွက်ခဲ့သောကြောင့် မရရှိသောအရင်းအမြစ်များ။ ဥပမာတစ်ခုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုရှိနိုင်ပြီး တစ်ခုတည်းကိုသာ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် လက်တွေ့မရသေးသည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု၏တန်ဖိုးသည် သင်ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပေ။ Coca-Cola နှင့် ရေတစ်ပုလင်းဝယ်ယူခြင်းကြား ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ တစ်ခုခု။ သင်မည်သို့ပင်ဆုံးဖြတ်ပါစေ၊ သင်မဝယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်သော ထိုထုတ်ကုန်တွင် အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ် အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
El ဤအသုံးအနှုန်းကို ဖန်တီးသူမှာ စီးပွားရေးပညာရှင် Friedrich von Wiser၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်လိုက်တာလို့ သူ့ရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး သီအိုရီ (၁၉၁၄) မှာ သူသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ သူ့အတွက်၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုသာ ရှိသေးသည်၊ အခြားတစ်ခုကို ဖယ်ပစ်ရမည်၊ ထို့ကြောင့် ဤအခေါ်အဝေါ်ကို ပယ်ချရမည်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများမှလွဲ၍ ဤအသုံးအနှုန်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်တွင်လည်း သုံးနိုင်သည်။
မတူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကြားတွင် ပြုလုပ်ရမည့် ရွေးချယ်မှုတိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ ပါဝင်သောကြောင့်၊ အခွင့်အလမ်းစရိတ်ကို အမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်-
အဲဒါတွေကို ရည်ညွှန်းတယ်။ အရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်ခွင့်များသည် တစ်သားတည်းမဖြစ်သောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အသုံးစရိတ်များတစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းတို့သည် ညီမျှခြင်းကြားတွင် တတ်နိုင်သမျှ ဟန်ချက်ညီအောင် သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်အဖြစ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေ။
ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ထိုအရင်းအမြစ်များသည် ထိရောက်မှုမရှိ၍ ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မူရင်းနှင့် တူညီသော အရည်အသွေးမရှိသော အခြားအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရောင်းအားကျဆင်းသွားပြီး ၎င်းတို့အတွက် လိုအပ်ချက်မရှိသောကြောင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးမပြုတော့သည့်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို Ricardian cost ဟုခေါ်ပြီး ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များကို ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မထိခိုက်စေဘဲ အခြားသူများက အစားထိုးသည့်အခါ ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေးတန်းတူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ယခင်ကကဲ့သို့ ဥပမာပေးထားပြီး၊ သင်သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုထုတ်လုပ်နေပြီး အရည်အသွေးတူညီသော်လည်း အခြားသူများအတွက် ယင်းဒြပ်စင်များ၏ အရင်းအမြစ်အချို့ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အရာသည် သင့်အား ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် အရည်အသွေး သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုကို မထိခိုက်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် လက်ခံနိုင်လောက်သော ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။
အခွင့်အလမ်းစရိတ်က ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။
အဲဒါကို စဉ်းစားရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတိုင်း ချန်ထားခဲ့တဲ့ တခြားသူတွေကို ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ အတူ သင်ရရမယ့် အမြတ်တွေလည်း ဒီအခြေအနေမှာ အရှုံးပေါ်နေပါပြီ။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်သည် များစွာသော ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို အပြုသဘောဆောင်ပြီး အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးဆက်များကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် စျေးသက်သာသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သော်လည်း၊ အမှန်တရားမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကိုနေ့စဉ်အခြေခံ၍ အသုံးချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခွင့်အလမ်းစရိတ်များဖြင့် သင်ရနိုင်သည်။ အဲဒီ အယူအဆကို စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အမြတ်က ဘာလဲ။ ပြီးတော့ ငါတို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ လုပ်ငန်းအဆင့်တွင်၊ ရွေးချယ်မှုမပြုလုပ်မီ တစ်ခါတစ်ရံ နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ရန်၊ အသင့်လျော်ဆုံးရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အနှစ်သက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပထမတစ်ချက်တွင် အမြတ်အစွန်းပိုရသောအရာကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ နှစ်ခုလုံး၏ အကျိုးနှင့် အကျိုးဆက်များကိုသာ ဆုံးဖြတ်ရန် တန်ဖိုးရှိသည်။
ယခု၊ ဤအခြေအနေအများစုတွင်၊ ကုန်ကျစရိတ်သည် မှန်ကန်သောတန်ဖိုးဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း အခြားအချက်များစွာလည်း ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချိန်အများစုကို ကုမ္ပဏီအတွက် အကြီးမားဆုံးအကျိုးအမြတ်ရှိသူက နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ငွေရေးကြေးရေးမှာ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်က ဘာလဲ။
အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်က ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် နည်းနည်းတော့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၊ လက်ခံနိုင်ခြေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု၏ အမြတ်အစွန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ပရောဂျက်နှစ်ခု (A နှင့် B) တွင် သင့်ငွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်ပါက ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည် သင့်အား အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ပေးနိုင်ပါသည်။ တခါယူ၊ အခြားဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရွေးချယ်ထားသည့်အရာနှင့် ရရှိထားသည်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရွေးချယ်မှုကောင်းခြင်းရှိမရှိ သိရန် အချိန် x ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရပါမည်။
ပိုလက်တွေ့ ဥပမာနဲ့ ကြည့်ရအောင်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ရန် သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ မင်းအဝတ်အစားတွေသွားဝယ်ပြီး စုပြီး အလုပ်သွားလုပ်တယ်။ သို့သော် တစ်နှစ်အကြာတွင် သင်သည် မည်သည့်အမြတ်အစွန်းမှ မရရှိခဲ့ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်0အမြတ်အစွန်းရှိသည်။
ထို့နောက် အခွင့်အရေးကုန်ကျစရိတ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများ မည်မျှရှိသည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ယင်းနည်းလမ်းဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးနှင့်0ထက်ကြီးပါက၊ သင်မရွေးချယ်ခဲ့သောကြောင့် အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရွေးချယ်မှု ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ၎င်းတို့သည် အပျက်သဘောဆောင်ပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တစ်စုံတစ်ရာသတင်းမပို့ပါက စတိုးဆိုင်သည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတာကို အခုပဲတွေးနေတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါကို တကယ်နားလည်ဖို့ သရုပ်ဖော်ပုံအဆင့်မှာ အဆင်ပြေမယ့် ညီမျှခြင်းတစ်ခုကို သင့်မှာထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ် = သင်မယူသောရွေးချယ်မှု၏တန်ဖိုး - သင်ယူသည့်ရွေးချယ်မှု၏တန်ဖိုး။
တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် သင်ပယ်ချခဲ့သော ရွေးချယ်မှုနှင့် သင်အမှန်တကယ်ရယူခဲ့သည့်အရာနှင့် အောင်မြင်မှုကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
0 ထက် ပိုကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်မဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ထက် ပိုကောင်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
0. ဆိုလိုသည်မှာ၊ ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုနှင့် အခြားတစ်ခု နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသည် (သို့မဟုတ် သင်စိတ်ကူးယဉ်သော ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြင့် ကစားသောကြောင့် တူညီသော ရရှိနိုင်သည်)။
0 ထက်နည်းသော၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ထိုနှုတ်နှုတ်မှုတွင် အနုတ်လက္ခဏာ ထွက်လာသောအခါ၊ သင်ယူထားသော ရွေးချယ်မှုသည် သင့်လျော်ပြီး သင့်အား အနိုင်ရစေကြောင်း ညွှန်ပြလိမ့်မည်။
အခွင့်အလမ်း ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ အခု ပိုရှင်းနေသလား။ မင်းမှာ သံသယရှိလား။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို မစဉ်းစားဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို မေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အခွင့်အလမ်းစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။